फिल्म समीक्षाः मैदानबाहिर बहकिएको ‘क्याप्टेन’Ayush
९० मिनेटको फुटबल खेल र औसत दुई घण्टाको फिल्मबीच थुप्रै समानता हुन्छन् । द्वन्द्व हुन्छ, रोमाञ्चकता हुन्छ, उत्कर्ष हुन्छ दुबैमा । फुटबलको जादु, जसले रमितेलाई क्षणमै रोमाञ्चित बनाउँछ, क्षणमै बिस्मित तुल्याउँछ । क्षणमै उमंगित बनाउँछ, फेरी क्षणमै हतास पनि । यही कारण त प्याराफिटमा कोही पनि शान्तसँग, धैर्यतापूर्वक बस्न सक्दैनन् ।
३ बर्ष अघि
शनिबार पनि बोलाइयो प्रतिनिधिसभा बैठकAyush
संविधान अनुकूल नरहेका कानुनको परिमार्जन फागुन २१ गतेभित्रै गरिसक्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि शनिबार पनि बोलाइएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको हो ।
दुर्घटनामा परेका पाइलट को हुन् ?Ayush
ताप्लेजुङमा बुधबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका पाइलट प्रभाकर केसी काठमाडौं ताहाचलका स्थायी बासिन्दा हुन् । २६ वर्षीय प्रभाकरले एअर डाइनेस्टीमा क्याप्टेनको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन वर्ष भएको थियो । एअर डाइनेस्टीमा आउनुअघि उनी श्री एयरलाइन्समा आवद्ध थिए ।
अधिकार खोसे कानूनी उपचार खोज्ने स्थानीय सरकारको चेतावनीAyush
स्थानीय सरकारहरुले संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने प्रयास भए केन्द्र सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा केन्द्र सकारलाई खबरदारी गरेका हुन् ।
भारतीय वायूसेनाको बमवारीमा एउटा काग मर्‍यो !Ayush
भारतीय वायूसेनाले गत मंगलबार पाकिस्तानी एयरस्पेसमा पसेर बम वर्षा गर्‍यो । उक्त आक्रमणमा आतंकवादी समूह जैस ए मोहम्मदको किल्ला ध्वस्त भएको र सयौं हताहति भएको भारतीय मिडियाहरुले दावी गरिरहेका छन् । तर, निश्पक्ष अनुसन्धानबाट भने यो दावी असत्य सावित भएको छ ।
वाइडबडीमा रवीन्द्र अधिकारी निर्दोष थिए : प्रधानमन्त्री ओलीAyush
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा रविन्द्र अधिकारी निर्दोष रहेको बताएका छन् । हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका अधिकारीको शोक प्रस्ताव पारित गर्न शुक्रबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडीबारे बोलेका हुन् ।
राजनारायण पाठक घुस प्रकरण : भरिया बनेका राजपा नेताको बयान सुरुAyush
७८ लाख घुस प्रकरणमा भरिया बनेका राजपा नेता ज्ञानेन्द्र झासँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएको छ । शुक्रबार दिउँसो आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमा उनको लिखित बयान लिइएको हो । यसअघि भक्तपुरस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको विवाद सल्ट्याइदिने सर्तमा ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको सार्वजनिक भएपछि आयोगका आयुक्त पाठकले राजीनामा दिएका थिए ।
आँखा छोपी नरोउ भनी भन्नु पर्‍या छ..‍.Ayush
दिवंगत पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीका १० वर्षीय कान्छो छोरा स्वराज बिहीबार छिमेकी तथा पिताका राजनीतिक सहयात्री धनराज आचार्यलाई सोधिरहेका थिए, ‘अंकल, मेरो बाबा कहिले घर आउनुहुन्छ ?’ तर, शुक्रबार उनी आफ्नो आमासामू अभिभावकजसरी प्रस्तुत भए । रविन्द्रको निधनपछि काठमाडौं ल्याइएकी पत्नी बिद्या भट्टराईलाई आजै काठमाडौंबाट पोखरा लगिएको थियो ।
अलविदा रविन्द्र !Ayush
ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ५ जनाको शुक्रबार अन्त्येष्टि गरिएको छ । अधिकारीको गृहनगर पोखरामा र पाँच जनाको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो ।
भारत-पाकिस्तान द्वन्द्व: पाकिस्तानले भारतीय वायुसेनाका पाइलटलाई शुक्रवार मुक्त गर्नेNepali Babu
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाकिस्तानी सेनाले हवाई कारबाहीपछि आफ्नो कब्जामा लिएका भारतीय लडाकु विमानका चालकलाई फिर्ता गरिने बताएका छन्। भारत र पाकिस्तानबीच बुधवार भएको हवाई आक्रमणमा भारतीय वायुसेनाका अभिनव वर्तमानलाई पाकिस्तानले समातेको थियो।भारतले उनलाई सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न माग गरेको थियो।
ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनाः मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आफ्नो अन्तिम भाषणमा के भनेNepali Babu
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टर पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा त्यसमा सवार सबै सात जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनास्थल प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरानजिकै रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकारीहरू भएको एउटा टोलीसहित उनी तेह्रथुमको चुहानडाँडामा एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
ताप्लेजुङ दुर्घटनाका अनुत्तरित प्रश्नNepali Babu
हेलिकप्टर दुर्घटनापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य योगेश भट्टराईले ट्वीट गरे– पाँच जना मात्र भीआईपी बोक्ने हेलिकप्टरले किन सात जना बोक्यो? हेलिकप्टरमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सहित ७ जना सवार थिए। पाइलट प्रभाकर केसीले उडाएको हेलिकप्टर सुकेटार टावरमा दिउँसो पौने एक बजेसम्म सम्पर्कमा आएको थियो।
महाभारतको युद्धमा भएको थियो परमाणु बमको प्रयोग !Nepali Babu
एउटा नयाँ दाबी अनुसार परमाणु बमको पहिलो प्रयोग महाभारतको युद्धमा गरिएको थियो । वैज्ञानिकहरुले महाभारतको युद्धमा परमाणु बमको प्रयोग गरिएको प्रमाण फेला परेको दाबी गरेका छन् । परमाणु बमको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक जुलियस रोबर्ट ओपनहाइमरले आफ्नो अनुसन्धानमा यो कुराको खुलासा गरेका छन् । उनका अनुसार महाभारत कालमा नै परमाणु बमजस्ता विनाशकारी हतियारको प्रयोग भएको थियो ।
अमेजन मालिक बने दुनियाकै दानी दम्पत्ति, बिल गेट्स र जुकरबर्ग कन्जुस बन्दै !Nepali Babu
हालै मात्र सम्बन्ध विच्छेद गरेका अमेरिकी इकमर्श कम्पनी अमेजनका मालिक जेफ बेजोस र म्याकेन्जी बेजोस विश्वका सबैभन्दा दानी दम्पत्ति बनेका छन् । सन् २०१८ मा यो दम्पत्तिले विश्वमा सबैभन्दा धेरै रकम च्यारिटीका लागि दान गरेको छ । दी क्रोनिकल फिलान्थ्रोपीका अनुसार जेफ र म्याकेन्जीले सन् २०१८ मा घरवारबिहीन परिवारहरुको सहयोगका लागि २ अर्ब डलर दान गरेका छन् ।
फेसबुकले ल्याउँदैछ clear history फिचरNepali Babu
सोसल मिडिया प्लाटफर्म फेसबुकले अन्ततः प्रयोगकर्ताले व्यग्र रुपमा प्रतिक्षा गरिरहेको एउटा प्राइभेसी फिचर लञ्च गर्दैछ । Clear History नामक उक्त फिचरको सहयोगमा फेसबुक प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा एकित्रत गरिएका डाटा डिलिट गर्न सक्नेछन् । फेसबुकका प्रमुख वित्तिय अधिकारी डेभिड वेहनेरले बार्सिलोनामा जारी मिडिया एण्ड टेलिकम कन्फ्रेन्सका अवसरमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
भियतनाममा ट्रम्प र किमबीचको वार्ता असफलNepali Babu
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच भियतनामको हनोइमा भएको वार्ता असफल भएको छ । दुई नेताको वार्ताबाट कुनै साझा समझदारी नबनेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । ‘यसपटक कुनै समझदारी भएन तर, उनीहरुको आआफ्ना टिमले भविष्यमा वैठकका लागि प्रयास गर्नेछन्,’ ह्वाइट हाउसका प्रेस सेक्रेटरी सराह सेन्डरले एक विज्ञप्तिमा भनेकी छन् ।
२० लाख पर्यटक भित्र्याएर केक काट्ने सपना अधुरै !Nepali Babu
पद सम्हालेकै दिनमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पहिलो निर्णय थियो, ‘सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षका रुपमा मनाएर १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने ।’ पछि उनले १५ लाखको लक्ष्यमा चित्त बुझाएनन्, यसलाई संशोधन गरेर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य र रणनीति सार्वजनिक गरे ।
अमेरिकी मध्यस्थतामा भारत–पाकिस्तान तनाव चाँडै हल हुँदैछ : ट्रम्पRoshan
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानबीच जारी तनाव चाँडै हल हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । उनले दुई देशबीच अमेरिकाले मध्यस्थता गरिरहेको दावी पनि गरेका छन् । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसित वार्ताका लागि भियतनामको हनोईमा पुगेका ट्रम्पले साइडलाइन कुराकानीमा भारत–पाकिस्तानबारे प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
पाकिस्तानले पाइलट कब्जामा लिएपछि भारत ‘ब्याकफुटमा’Roshan
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भारत र पाकिस्तानबाट ‘आकर्षक खबर’ आफूले पाएको बताए । उनले दुई देशबीचको तनाव चाँडै समाधान हुन गइरहेको भविष्यवाणी पनि गरेका छन् । के ट्रम्पले भनेजस्तै दुई देश समाधानउन्मुख भएका हुन् त ?
हिमपातले अवरुद्ध त्रिभुवन राजपथ खुल्योRoshan
भारी हिमपातका कारण अवरुद्ध भएको त्रिभुवन राजपथ खुलेको छ । बुधबार रातिदेखि भएको हिमपातका कारण राजपथको थाहा नगरपालिका खण्ड अवरुद्ध भएको थियो । नगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालयको टोलीले सडकबाट हिउँ पन्छाएपछि गाडी चल्न थालेको नगरपालिकाका उममेयर खड्ग गोपालीले बताए ।